Ma Furi Karto Faylasha Email-kaaga Aad Udegsantahay. Faylka Faylku maahan Fayl aan Khadka Tooska ah ku jirin.
Bogga ugu weyn Products DataNumen Exchange Recovery Faylka Faylku maahan Fayl aan Khadka Toosnayn
Macluumaad Faahfaahsan oo ku saabsan "Faylku maahan Faylka Faylka ee Khadka Tooska ah" Khalad
Markiitarka dib Microsoft Outlook, waxaad heleysaa farriinta khaladka soo socda:
Ma furi karo galka emailkaaga caadiga ah. Faylka xxxx.ost maahan feyl fayl qadla'aan ah.
Waxaa jira laba sababood oo sababi doona qaladkan, sida soo socota:
The OST faylka wuu dhaawacmay ama wuu kharribmay, mana aqoonsan karo Microsoft Outlook, sidaa darteed Muuqaalka ayaa ka warbixinaya qaladkan.
The OST faylka wuxuu xiriir la leeyahay sanduuqa boostada ee serverka Sarrifka. Haddii sababo jira awgood, Microsoft Outlook ma geli karto sanduuqa isweydaarsiga ama start oo kaashanaya sanduuqa boostada faylalka qad la'aanta ah ee kujira OST Tusaalooyinka caadiga ah waa:
1. Muuqaalka, ma aadan dhigan koontada emaylka si aad si sax ah ugu gasho sanduuqa isweydaarsiga.
2. Muuqaalka, waxaad tirtirtay koontada emaylka ee sanduuqa isdhaafsiga.
3. In Serverka sarifka, sanduuqa isweydaarsiga, ama koontada emaylka ee sanduuqa isweydaarsiga wuu dansan yahay ama la tirtiray
4. Waxaa jira dhibaatooyin xagga isgaarsiinta ah oo udhaxeeya Muuqaalka Muuqaalka iyo Sarifka Sarifka.
5. Ma lihid akoon e-mayl gabi ahaanba. Koontada emaylkaaguna waxay ku saleysan tahay POP3, IMAP, HTTP ama boosteejooyinka aan ahayn serverka Exchange. Laakiin waxaad dejisay koontada emaylkaaga sida Beddelka ku saleysan si qalad ah.
Si loo xaliyo qaladkan oo looga hortago luminta xogta, waa inaad sameysaa sida soo socota:
Samatabbixi xogta qad la'aanta ah ee ku jirta OST gudbiso. Isbedelka OST Faylka waxaa ku jira xog qadla'aan ah, oo ay kujiraan fariimaha boostada iyo dhamaan waxyaabaha kale, sanduuqaaga Exchange Exchange, oo muhiim kuu ah adiga. Si loo badbaadiyo xogtan, waa inaad isticmaalka DataNumen Exchange Recovery si loo baaro OST faylka, soo kabso xogta ku jirta, oo ku keydi faylka Muuqaalka PST si aad uga wada heli karto dhammaan fariimaha iyo walxaha Muuqaalka si fudud oo hufan.
Kaabta ah OST gudbiso. Amaanka dartiis, waad ka fiicnaan laheyd.
Haddii sanduuqaaga isweydaarsiga iyo koontada emaylka ay weli shaqeynayaan, markaa waa inaad hubisaa in cinwaannada koontada emailka ee Muuqaalka ay sax yihiin, oo Muuqaalka ayaa si sax ah ugu xirmi kara server-kaaga Exchange. Markaa waad start Muuqaalka oo dir ama ku soo dir e-mayladaada sanduuqa isweydaarsiga, kaas oo ka dhigi doona Muuqaalka inuu abuuro mid cusub OST si toos ah u fayl garayso isla markaana ku waafajiso xogteeda sanduuqa isweydaarsiga Haddii habkaani shaqeyn waayo, fadlan raac tilmaamaha ku qoran 5.2.
5.2. Haddii sanduuqaaga isweydaarsiga ama koontada emaylka uusan jirin wax intaa ka badan, ama aadan haysan akoon emayl isweydaarsi gabi ahaanba, ama tilmaamaha ku qoran 5.1 aysan shaqeynayn, markaa cinwaanka boostadaada ee imika uu khaldan yahay, waa inaad tirtirtaa oo abuur mid cusub, sida soo socota:
5.2.1 Guji Start, kadibna guji Control Panel.
5.2.2 Guji U beddel aragtida caadiga ah haddii aad isticmaaleyso Windows XP ama noocyo ka sareeya.
5.2.3 Laba-guji Mail.
5.2.4 Gudaha Dejinta Fariimaha sanduuqa wada-hadalka, guji Muuji Profiles.
5.2.5 Xullo mid kamida astaanta khaldan ee liiska guji saar si looga saaro.
5.2.6 Ku celi 5.2.5 illaa dhammaan astaamaha khaldan laga saaro.
5.2.7 Guji Add si loo abuuro astaan ​​cusub oo loogu daro akoonnada emaylka iyadoo loo eegayo noocyadooda.
5.2.8 Start Muuqaalka, waxaad arki doontaa dhibaatada meesha ka baxday.